मनाेरञ्जन Archives - Purbeli News
काठमाडौं / लामो समयसम्म राजसंस्थाको वकालत गर्दै आएका अभिनेता भुवन केसी सांसद् बन्ने लोभले राजनीतिमा प्रवेश गरे । २०७० मा एमालेबाट काठमाडौं १ सांसद उठ्न खोजेका थिए । तर एमालेले विद्या न्यौपानेलाई बनायो । २०७४ मा ओलीसँग आफूलाई चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष बनाउन आग्रह गरे। ओलीले हेरौँला भन्ने जवाफ दिए । भुवन केसी एमालेमा माधव नेपालनिकट भएकाले पनि ओ...
गायिका इन्दिराले चितवनमा गरिन् विवाह
काठमाण्डौ / चर्चित गायिका इन्दिरा जोशीले प्रेमी शरद केडियासँग विवाह गरेकी छन् । उनीहरुको विवाह समारोह चितवनको बाराही जंगल लजमा आयोजना गरिएको हो । विवाहमा दुवैका परिवार, सीमित आफन्त र साथीभाइको उपस्थिती रहेको छ । उनले आइतबार इन्स्टाग्राममा विवाहको मिति तोकिएको कार्ड सार्वजनिक गर्दै मंगलबार(आज) प्रेमी शरदसँग विवाह गर्ने जानकारी गराएकी थिइन् । ...
झाेराहाटमा खुल्ला कविता प्रतियाेगिता सम्पन्न
सुन्दरहरैंचा / माेरङकाे झाेराहाट नाटकघरमा खुल्ला कविता प्रतियाेगिता सम्पन्न भएको छ। प्रतियाेगिता काेशी साँस्कृतिक प्रतिष्ठान विराटनगरकाे आयाेजना तथा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्षेत्र न. ४ काे सहयाेगमा सम्पन्न एको थियाे । खुल्ला कविता प्रतियाेगितामा ३५ जाना कविहरुले आ–आफ्ना रचना वाचन गरेका थिए । जसमा सुनसरीबाट शकुन्तला मञ्जरी...
काठमाडौं / डान्सिङ रियालिटी शो ‘डान्स मास्टर लिटिल च्याम्प्स’ को भोटिङ पार्टनरमा ‘पे वेल’ ले सहकार्य गर्ने भएको छ । आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच थ्री- प्रोडक्सन र पे–वेलबीच सम्झौता भएको हो । बालबालिका केन्द्रित यस शोको डिजिटल अडिसन यस अघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त अडिसनबाट छानिएका प्रतिभाहरूका लागि चाँडै नै फिजिकल अडिसन सुरु गरिने निर्माण पक्षले ...
एजेन्सी / पोर्न फिल्म उद्योगमा करियर सकिएपछि पोर्न स्टार के गरिरहेका छन् ? यो आम चासोको विषय छ । यो प्रश्नको जवाफ सन् २०१२ मा रिलिज फिल्म निर्माता ब्राइसी वागोनरको फिल्म ‘आफ्टर पोर्न इण्डस्’मा छ । यसको दुई सिक्वेल छन् । यो फिल्मले पोर्न उद्योग छोडेपछि कलाकारसँग जोडिएको दुःख र सफलतालाई प्रस्तुत गरेको छ । पोर्न फिल्ममा अभिनय गर्ने कलाकारलाई अहिलेस...
इटहरी / लोक दोहिरी गायनको क्षेत्रमा लोकप्रिय बनेकी गायिका कल्पना दाहालले सुटुक्कै विवाह गरेकी छन् । प्राप्त जानकारी अनुसार उनले परिवारका सिमित सदस्यलाई साक्षीको रुपमा राखेर ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेकी हुन् । उनले अमेरिका निवासी पुण्यप्रसाद आचार्यसंग सुटुक्कै अदालती विवाह गरेकी हुन् । जिल्ला अदालत काठमाडौं स्रोतले उनको विवाह भएको पुष्टि गरेको छ । टेलिभिजन...
‘कबड्डी ४’ की नायिकाविरुद्ध प्रदर्शन, सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने माग
काठमाडौं / ‘कबड्डी-४’ की नायिका मिरुना मगरविरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको छ । चाबहिलस्थित केएल टावर नजिकै प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनकारीहरूले नायिका मगरले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले चलचित्र ‘कबड्डी-४’ को पोस्टरसमेत जलाएका थिए । मिरुनाले आफूमाथि ब्याड टच गरेको भन्दै एकजना बौद्ध भिक्षु फुर्वा लामालाई झापड हानेकी थिइन्...
काठमाडौं / ऊबेला सांगीतिक समूहका संगीतकर्मी नित्य डि’ कुँवरले बालेनलाई राम्रो काम गर्न अभिप्रेरित गर्ने उदेश्य ‘स्याबास् बालेन स्याबास्’ नामको नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले युट्युब च्यानल ऊबेला मार्फत गीत र भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । गीत सिर्जना गर्नुको पछाडि बालेनको आँट, आत्मविश्वास र अघिल्लो चुनावअघिदेखिको अठोट, अनुसन्धान र हालको चुन...
बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल नआउने भएका छन् । उनी नआउने भएसँगै जेठ १४ गते दशरथ रंगशालामा हुने भनिएको ‘दबंग टुर रिलोडेड’ फेरि रोकिने भएको छ । आयोजकले सलमान खान लगायत टिमको माग पुरा गर्न नसकेका कारण कार्यक्रम रोकिने भएको हो ।आयोजक स्रोतले उनी नआउने पुष्टि गरेपनि यसबारे औपचारिक जानकारी विज्ञप्तिमार्फत दिइने जनाएको छ । ‘१४ गते कार्यक्रम नहुने नै...
काठमाडौँ / भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धी नीजी भ्रमणमा काठमाडौँमा छन् । सोमबार भिस्तारा एयरको विमानबाट काठमाडौँ ओर्लिएका उनी साँझ ठमेलस्थित नाइट क्लब एलओडी (लर्ड अफ द ड्रिङ्क्स) मा गएका थिए । यहाँ गएको भिडियोले नेपालका साथै भारतमा पनि चर्चा बटुलेको छ । यो भिडियो सेयर गर्दै भाजपाले कांग्रेस र राहुल गान्धीमाथि हमला ...